जहाजमा बच्चा जन्मिए, कहाँको नागरिकता प्राप्त गर्छ्न ? - Amurta Online	Amurta Online	जहाजमा बच्चा जन्मिए, कहाँको नागरिकता प्राप्त गर्छ्न ? - Amurta Online
जहाजमा बच्चा जन्मिए, कहाँको नागरिकता प्राप्त गर्छ्न ?
कार्तिक २८ एजेन्सी____ आकाशमा उडिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चाको जन्मस्थल र नागरिकता कहाँको होला ? यी प्रश्नहरु सबैको मनमा उब्जिएको हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले, यो जान्नुहोस् कि एसियामा ७ महिना वा सो भन्दा बढी गर्भवती महिलाको लागि हवाई यात्रामा प्रतिबन्ध छ, यद्यपि महिलाले केही विशेष परिस्थितिहरूमा हवाई यात्रा गर्न सक्छन्।
अब यस्तो अवस्थामा भारतबाट बेलायत जाने विमानमा एउटी महिलाले बच्चा जन्माइन् भने अब प्रश्न उठ्छ, त्यो बच्चाको जन्मस्थल र नागरिकता कहाँ होला ? यस्तो अवस्थामा बच्चाको जन्म हुँदा कुन देशमा विमान उडेको थियो त्यो हेर्नु पर्छ । जन्म प्रमाण सम्बन्धी कागजातहरू विमान अवतरण गर्ने देशको विमानस्थल प्राधिकरणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, बच्चालाई आमाबाबुको राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने अधिकार पनि छ।
यस्तै एउटा घटना अमेरिकामा बाहिर आएको छ । नेदरल्याण्डको राजधानी एम्स्टर्डमबाट अमेरिका जाँदै गरेको विमान त्यही क्रममा एक महिलाले छोरीलाई जन्म दिइन् । त्यतिबेला विमान एट्लान्टिक महासागरमाथि उडिरहेको थियो । विमान अवतरणपछि आमा र बच्चालाई अमेरिकाको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अमेरिकी सीमामा ती महिलाले छोरीलाई जन्म दिएकी छन् ।
जसका कारण युवतीले नेदरल्याण्ड र अमेरिका दुवैको नागरिकता पाएकी थिइन् । तर उड्ने विमानमा जन्मिएका बालबालिकाको नागरिकतालाई लिएर सबै देशमा फरक–फरक नियम छन् ।